Caalamka, 23 August 2019
Toos Idaacadda Habeennimo
Khamiis 23 August 2019
Israel oo duqeysay goobo ku yaalla Iraq
Israel ayaa fulisay ugu yaraan hal weerar oo ka dhan ah bakhaar hub oo ku yaalla dalka Iraq, waxaa sidaas weriyey wargeyska The New York Times.
Ciidamada Israel oo duqeeyey Gaza
Militariga Israel ayaa sheegay in ciidamadooda ay xalay duqeeyeen bartilmaameedyo ay kooxda Xamas ku leedahay Gaza, ayaga oo ka aargudanaya gantaallo ay kooxdaas kusoo ridday.
Afghanistan: Dhimashada weerarkii arooska oo gaartay 80
Khasaaraha dhimashada weerarkii kooxda Daacish ay ku qaadday xaflad aroos oo sabtidii ka dhaceysay magaalada Kabul ee dalka Afghanistan ayaa gaartay 80 qof, sida ay maanta sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda.
Afghanistan: Qaraxa xaflad aroos oo lagu dilay 63 qof
Kooxda IS qaybtooda dalka Afghanistan ayaa sheegtay masuuliyada qarax lala beegsaday aroos ka dhacayay magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan
Dad ka qeybgalayay xaflad-aroos oo lagu laayay Afghanstan
Ugu yaraan 63 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 180 kalana dhaawac ayaa soo gaaray, kaddib marki qaraxyo ismiidaamin ah lagu weeraray xaflad-aroos oo xalay ka dhacday magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan.
Falastiiniyiin lagu dilay Marinka Gaza
Wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa sheegtay in saddex nin oo Falastiini ah ay ku dhinteen mid kalana uu dhaawacmay kaddib marki ay toogteen ciidamada Israil Axadda maanta ah.
Israel oo mamnuucday booqashada Ilhaan iyo Rashida
Israel ayaa ka mamnuucday Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib oo ka tirsan Aqalka Wakiilada Mareykanka booqasho ay qorsheeyeen inay ku tagaan Qudus iyo Daanta Galbeed, waxaa sidaas maanta shaaciyey wasiir ku-xigeenka arrimaha dibedda Israel, Tzipi Hotovely.
Dhaqaalaha dunida oo wajahaya cabsi hoos u dhac
Suuqyada saamiyada Japan ayaa hoos u dhacay maanta, hase yeeshee uma xumeyn sida hoos u dhacii xoogganaa ee maalin ka hor asiibay suuqyada saamiyada Mareykanka, taasi oo sare u qaaday cabsida laga qabo burbur kusoo socda dhaqaalaha adduunka.
Golaha wasiirada Malaysia ayaa maanta ka wada-hadlay waxa laga yeelayo degenaanshaha joogtada ah ee uu dalkaas ku leeyahay Sheekha u dhashay India ee Zakir Naik, ayada oo saddex wasiir ay dalbadeen in dalka laga cayriyo sababo la xiriira eedeymo ku saabsan inuu jeediyey hadallo jinsiyeed xasaasi ah.
Xuutiyiinta oo 'weeraray' garoon ku yaalla Sacuudiga
Maleeshiyada Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliye lahayn ku qaaday garoonka Abha ee koonfurta galbeed ee Sacuudiga, ee ku dhow xuduudda Yemen, waxaa sidaas maanta sheegay taleefishinka Al-Masirah ee Xuutiyiinta.
Xujey ku sugan Makka oo sheegay inaysan weli xajin
Xujey ku sugan magaalada Makka ayaa sheegay inaysan weli gudanin waajibaadka xajka iyaga oo eedo u jeediyey shirkadaha loo idmay inay xujayda u adeegaan.
Kooxda qabsatay Cadan oo wada-hadal diyaar u ah
Hoggaamiyaha dhaqaaqa gooni ugoosadka ah ee Yemen, ayaa sheegay inuu diyaar u yahay ka qeyb galka wada-hadallo Sacuudiga uu marti-gelinayo, kadib markii dagaal uu la galay ciidamada dowladda Yemen taageera, uu tobaneeyo qof ku dilay magaalada Cadan.